Ku darista Qiimaha Dheeraadka ah ee Daabacaada - Intec Printing Solutions Ltd
Noqo lammaane Intec ah
Siyaasadaha & bayaannada
Goynta & rujin
Burburinta, lamination & holographics
Madbacadaha midabka dhijitaalka ah
Ku raadi alaab qaab ahaan
Wadayaasha & soo dejinta
Luqadaha caalamiga ah ee buug-gacmeedka isticmaala ColorSplash
Socodka shaqada & maamulka midabka
Xalka sumadda LPS215
Alaabooyinka dhaxalgalka ah
Diiwaangeli badeecad cusub
Taageerada muuqaalka 'Sida loo sameeyo'
Damaanada & soo celinta
MSDS - caafimaadka iyo badbaadada
Warbaahineed lagu taliyay & shahaado la siiyay
Warqadaha caddaanka ah
Xafiiska guud ee UK
Nidaamyada goynta dhijitaalka ah
Noocyo ballaaran oo ku habboon codsiyada iyo wax soo saarka
Nidaamyada fashilinta & laminating
Ku dar saamaynta qaaliga ah oo leh foils toner, laminates iyo filimada holographic
Nidaamyada daabacaadda midabka dhijitaalka ah
Modular, daabacayaasha farshaxanka garaafyada qeexida sare
Madbacadaha dhijitaalka ah
Intec waxa ay xuddun u ahayd hal-abuurnimada Ingiriiska iyo nashqadeynta warshadaha daabacaadda iyo dhamaystirka caalamiga ah tan iyo 1989 oo ay kortay si ay u noqoto alaab-qeybiye weyn oo xalal gaar ah u leh madbacadaha dhijitaalka ah, foilers iyo qalabka goynta.
Goynta dhijitaalka ah
Doorashada dijitaalka ah ee dil-goynta iyo xalalka dhunkashada ee codsiyada kala duwan ee baakadaha ilaa calaamadaha. Sariiro fidsan iyo nidaamyada quudinta tooska ah, mashiinnada jarista kaadhka ganacsiga iyo hababka goynta summada ee xaashida go'an ee dhunkashada gooyay.
Desktop iyo aaladaha lamination-ka ee xirfadlayaasha ah ee si xor ah u taagan, oo loogu talagalay in lagu bixiyo xal la awoodi karo oo laga rabo gudaha guriga si loogu daro foils bir ah, laminates iyo saamaynta holographic.
Si fudud ugu dar dhammaysyada qiimaha badan iyo saamaynta cajiibka ah xaashida daabacan.
Madbacadaha dhijitaalka ah oo heer-sare ah oo la awoodi karo, oo taageeraya xulasho ballaaran oo ah noocyada warbaahinta. Kala duwanaanshiyaha waxaa ka mid ah, doorashada 4 nooc oo midab leh oo loogu talagalay socodsiinta gaaban iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee daabacaadda kaadhka, baakadaha, boodhadhka, calaamadaha, baqshadaha, warbaahinta wareejinta iyo wax ka badan.
Fiiri kala duwanaanshaha badeecada Intec ee hadda.
Arag oo soo deji buug-yaraha alaabta.
Daawo muuqaalada alaabta
Kaliya ha qaadan ereygayaga - waa kan waxa macaamiisheena ay yiraahdaan - guji si aad u hesho daraasado.
Our Intec ColorFlare waxay noo kaydisaa lacag oo waxay u keentaa ganacsi cusub oo xiiso leh shirkadeena daabacaadda ganacsi ee mudada dheer dhisan.
Gooyaheena sariirta sariirta leh ee ColorCut wuxuu si dhab ah u caawiyay isbeddelka ganacsigeenna anagoo kordhinayna wax soo saarka & abuurista fursado cusub.
Kaararka Ciyaarta Dhaxalka
Waxaan soo saari karnaa hal tusaale ama xitaa qayb dhan oo muunado ah, si degdeg ah oo loo baahan yahay - annagoo ku kalsoon tayada shaqada.
Ma u baahan tahay Taageerada Fog ee Intec?
Caawimo degdeg ah toos uga hel khabiirka farsamada ee Intec - waxaanu kula wadaagi doonaa shaashaddaada TeamViewer oo aanu xallin doonaa wixii dhibaato ah ee aad kala kulmi karto qalabkaaga Intec. Wac Intec marka hore si aad u hesho kubbada.
Kaalmo ka hel TeamViewer
Xafiiska guud ee Intec UK:
11B Dawkins Road Estate Warshadaha, Poole, BH15 4JP UK
Ku saabsan Intec
Intec waa shirkad run ahaantii caalami ah, oo xafiisyo ku leh UK iyo USA, taageerta shabakad iibiyeyaasha adduunka oo dhan. Waxaa la aasaasay in ka badan 30 sano ka hor, Intec waxaa si weyn loogu tixgaliyaa la isku halayn karo, xirfad leh, alaabooyin gaar ah oo loogu talagalay daabacaadda & warshadaha sawirada. Halkaan ka akhri halkan. Akhri sida Intec uu 'isbeddel ugu samaynayo' iyada shaqo samafal.
Siyaasadaha & Qoraallada
Qoraallada sharciga ah
Faahfaahinta diiwaangelinta shirkadda
Noqo Shuraakada Intec
La xidhiidh Intec UK
La xidhiidh Intec USA
Ku biir bogga Wargeysyada in ay ka mid noqdaan kuwa ugu horreeya ee wararka helaya.
Hal qayb oo ka mid ah Intec Printing Solutions Ltd
Maxaa diidaya in aad iska diiwaan geliso warsidaha Intec ka hor inta aanad iimaylka noo soo dirin - oo aad gasho…
qiimo dhimis gaar ah!
[contact-form-7 id="320" title="iibka xiriirka"]